Qingdao Antai Heavy Industry milina dia naorina tamin'ny 2003, niova ho amin'ny ara-dalàna amin'izao fotoana izao anarana tamin'ny 2011. Any amin'ny morontsiraka andrefan'i tsara tarehy Qingdao, dia afa-30 km any Qingdao seranan-tsambo, mety ho fanondranana fitaterana. Ny atrikasa mandrakotra faritra mihoatra ny 15000 metatra toradroa, dia ny fikarohana, famolavolana, fanamboarana, fametrahana sy ny orinasa Consulting orinasa ho ambonin'ny famaranana, fiarovana ny tontolo iainana sy ny foundry vahaolana.
Company dia manana traikefa be dia be, ary mitondra ny ara-teknika sy ny mpiara-miasa matihanina, indrindra mahatonga nitifitra vary main'ny rivotra milina, fitaovana famerenana fasika, koronosy fitaovana, ary ny vovoka hetra. Qingdao Antai Mahery amin'ny fanomezana tsy fitsipika famolavolana sy fanamboarana araka ny mpanjifa filàna manokana.
Qingdao Antai nitifitra vary main'ny rivotra velively mampitolagaga ny teknolojia ho anao sy ny manan-tsaina famolavolana, vaovao ary indrindra antsipirihany mateza singa. Dia manolotra anareo ny ankapobeny vahaolana, araka ny ananantsika manokana ny fampandrosoana, injeniera, famokarana sy Ankehitriny-varotra fanompoana.
Rafitra rehetra dia nandinika sy naka fanahy alohan'ny fanaterana eo amin 'ny atrikasa mba hahazoana antoka mafy fametrahana an-toerana ka afaho ny vokatra azo antoka ara-potoana isaky ny time.Here tao Qingdao Antai, rehefa avy-varotra fanohanana ihany koa ny laharam-pahamehana ambony Ka dia hahazoana antoka fa azonao ny mila hanampy anao amin'ny vao nanolotra sy valim-pitia lehibe indrindra naka fanahy system.Our dia ny fahafaham-po ny mpanjifa ny vokatra nahavita izao aza.
Ny orinasa izay no lasa ISO9 0 0 1: 2 0 0 8, ISO 1 4 0 0 1: 2 0 04, tamin'ny taona fanamarinana. Ny fitantanana orinasa hentitra araka ny fenitra iraisam-pirenena ISO9 0 0 0 toetra rafitra fampiharana asa.
Efa nanorina lavitra ezaka fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy marika iraisam-pirenena, toy ny ABB maotera; Manjaitra fitaovana boaty, Mitsubishi / OMRON / Siemens herinaratra votoatiny, SMC varingarina, SKF & NSK jaza, ka hanin-kotrana Asco valves. Miaraka amin'ny kalitao ny vokatra, mifaninana vidiny sy hihaino asa fanompoana, ny vokatra dia be amidy ao amin'ny tsena anatiny, ary naondrana any Amercia, Alemaina, Rosia, Aostralia, India, Gresy, Sri Lanka, Vietnam, Pakistan, Uruguay, Ekoatera, Kolombia, Israel, Ukraine, Bangladesh, Ozbekistan, Filipina, Hongria, Makedonia sy Indonezia sns
Foana isika manaraka "ny fahamarinan-toetra dia ny tsara indrindra fivarotana, ny fanompoana manokana no vokatra farany. Mpanjifa fahafaham-po lehibe indrindra tosika ho amin'ny fampandrosoana ny orinasa. "Mikendry ny hanorina toetra tonga lafatra sy ny rafitra fitantanana vaovao Network for nametraka rafitra feedback misaraka ho an'ny mpanjifa tsirairay, mba hanome indrindra mpanjifa amin'ny fiahiana sy voahevitra, mahomby sy hentitra loatra fanompoana manontolo.
dia miandrandra ny miara-miasa amin'ny orinasa aminao sy ny fiaraha-miasa ny tso-po!